मासुका प्रकार संगै जन्मन्छन् नयाँ-नयाँ व्यवसाय !  HamroKatha
मासुका प्रकार संगै जन्मन्छन् नयाँ-नयाँ व्यवसाय !
व्यवायिक रूपमा पाल्न सुरु गरेको करिब ५ वर्ष पछि २०७० सालबाट यसले मासु बजारमा लग्यो । पहिलो वर्ष नै वार्षिक १० करोड रुपैयाँको मासु बिक्री भयो । अर्को साल झन् मासुको माग बढ्यो । ३५ करोड रुपैयाँसम्मको मासुको माग देशभरिका केन्द्र आयो । किन लोकप्रिय भयो त यो मासु ?
हाम्रो कथा २०७६ जेठ ३ गते १७:२४
२०६५ सालमा अष्ट्रिच नेपालले अष्ट्रिच पालन सुरु गर्‍यो । नेपालमा अष्ट्रिच पालनको व्यवसायीक सुरुवात यसै वर्षलाई मानिन्छ । व्यवायिक रूपमा पाल्न सुरु गरेको करिब ५ वर्ष पछि २०७० सालबाट यसले मासु बजारमा लग्यो । पहिलो वर्ष नै वार्षिक १० करोड रुपैयाँको मासु बिक्री भयो । अर्को साल झन् मासुको माग बढ्यो । ३५ करोड रुपैयाँसम्मको मासुको माग देशभरिका केन्द्र आयो । किन लोकप्रिय भयो त यो मासु ?
अष्ट्रिच नेपालका बजार प्रबन्धक कमल पौडेल बताउँछन्, “पहिलो महिना १०/१५ करोडको मासु बिक्री भयो । दोस्रो पटक फेरी अष्ट्रिच हुर्काएर बजारमा पुर्‍याउनु ३०/३५ करोडको व्यापार भयो । ग्राहकहरू यस बारे शिक्षित हुँदै जाँदा, यो मासु खाने बानी बस्दै गयो ।”
अष्ट्रिचको मासुमा फ्याट कम हुन्छ, पौष्टिक हुन्छ, स्वास्थ्यको लागी पनि राम्रो छ । सुरुसुरुमा अष्ट्रिच बाहिरबाट ल्याउनु पर्थियो । अहिले हामी नेपालमै आफै पाल्न सुरु गर्‍यौँ ।
सुरुका दिनमा मासुको मूल्य र ग्राहकका गुनासा बिच निकै खाडल थिए । मासुको मूल्य बढी भयो भन्दै ग्राहकहरू गुनासो गर्थे । तर जब ग्राहकले मासुबारे थाहा पाए, ग्राहकले मासु मूल्यको मूल्यलाई सामान्यरुपमा लिन थाले ।
अष्ट्रिचको मासुबारे कमल पौडेल बताउँछन्, “खसीको मूल्य बारबारको छ । हड्डी बिनाको मासुलाई किलोको ९७० रुपैयाँ पर्छ र हड्डी सहितको प्रति किलो १,५०० रुपैयाँ, कमलो (टेन्डर) मासुको भने प्रति किलो २, ५०० रुपैयाँ पर्छ ।”
अष्ट्रिजको मासुको मुख्य बजार काठमाडौँ हो । सुपरमार्केटहरु मुख्य विक्री केन्द्र हुन् । कोही कोही राम्रा मासु पसलले पनि बिक्रीका लागि राख्ने गरेका छन् ।
कमल व्यवसायको सुरुवाती चरण सम्झन्छन्, “कमल सुरुमा सफा कोल्ड स्टोर, अलि राम्रा होटेलहरूमा बिक्री वितरण गर्‍यौँ । त्यसपछि, बजार बिस्तार गर्दै गयौँ भाटभटिनीमा र अन्य मुख्य सहरमा बजार बन्दै गयो । तर मुख्य बजार काठमाडौँ नै हो ।”
सुरु सुरुमा जिब्रोमा बसेको मासुको स्वाद आएन भन्ने मान्नेहरू पनि अहिले अष्ट्रिजको मासु मन पराउँछन् । यो मासुले सबै वर्गका ग्राहकको मन जितेको छ ।
कमल थप व्यक्त गर्दछन्, “अहिलेको समय अष्ट्रिजको मासु बच्चा, युवा, बूढाबूढी सबैले मन पराएका छन् । समस्त परिवारले खान मन पराएका छन् ।”
परिवार, साथीभाइसँग बसेर रमाइलो गर्दै मासुका मिठा मिठा परिकार खानुको मज्जा नै भिन्नै हुन्छ । तर आज उपभोक्ताले मासु मात्र होइन स्वास्थ्य मासु खोज्ने गर्छन् । उपभोक्ताको त्यही चाहनाले मासु व्यवसायमा नयाँ नयाँ उद्यमको विकास भइरहेको छ ।
४४ मिनेट अगाडि ५८ सेकेन्डमा पढिने
स्वदेशी ब्राण्ड फाइब्रोको कथा !
१ दिन अगाडि २ मिनेटमा पढिने